कुनाकानी : मेरो परिवेश: 2009
शायद क्याम्सका शौचालयका भित्तामा जथाभावी कुराहरू लेखिनु नौलो कुरा होइन । गएको साता संयोग परेर भनौँ की हतार भएर एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको कार्यालयको शौचालयमा पसियो । हुन त शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि पानी भएको ठाउँमा सबैले पानी खन्याउँछन् जस्तो लाग्छ तै पनि त्यहाँ शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि पानीले सफा गर्नको लागि अंग्रेजीमा सूचना टाँसिएको थियो । तर अचम्म, टाँसिएको प्रत्येक सूचनालाई हस्तलिखित अक्षरमा जवाफ पो लेखिएको रहेछ । "म अंग्रेजी बुझ्दिन कृपया नेपालीमा लेख्नुहोस्" भन्ने देखि "टाइम पनि त हुनु पर्‍यो नि" भन्ने सम्मका जवाफ त्यहाँ थिए । पत्रकारितालाई मर्यादित पेसा भनिन्छ , तर नेपालका कति पत्रकार कुन स्तरले सभ्य छन् ? यो प्रश्न उठाउन पाइन्छ कि पाइँदैन मलाई थाहा छैन । अधिकांश पत्रकारले मात्र प्रयोग गर्ने त्यो शौचालयको सूचना र जवाफले म त छक्क परेँ अनि गरिहालेँ क्लिक क्लिक ।
Posted by वसन्त बलामी at 10:00 PM7comments:
Labels: तस्वीर कुनो
देश जनताको हो । जनता देशका मालिक हुन् । अनि राज्य र सरकार जनताका अभिभावक हुन् । परिवारमा साना छोरा छोरी लाइ बौद्धिक र शारिरिक जुनसुकै कुराको विकास गराउन आमाबाबुले हरतरहले उनीहरुका आवश्यकता पूरा गर्दछन् । यो कुरा कुनै आमा बाबुलाइ सिकाइराख्नु पर्दैन । यस्तै कुरा देशमा पनि लागु हुन्छ । जनतालाइ बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपासको आवश्यकता पूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो । यहाँ कर्णालीपारीका जनता राज्यले दिएको कुहिसकेको चामल खान विवश छन् ,तराइमा एकसरो लुगाले वर्षौँ सम्म पुर्‍याउनुपर्छ, शितलहरले प्रत्येक वर्ष उनीहरूको जीवन खोस्छ । अनि वास वस्नको लागि एककठ्ठा जमीन र ओत लाग्ने छानो यिनीहरूसँग छैन ।
चिसो बाट जोगिन अनि आफ्नो टाउको छानोमूनि राख्न कैलालीमा सुकुम्बासी जनताले जंगलका रुखकाटेर छाप्रो बनाएको एकहप्ता मात्र भएको थियो । ति घरहरू हृदयहीन कठोर मानिसहरूले जलाइदिए । उनिहरूसँग भएको लुगाफाटो, भाँडावर्तन सबै सबै खरानी बनाइए । निहत्था महिला, बालबालिकाको भागदौड मच्चियो । कुनै चलचित्रका खलनायकले निभाउने भूमिका प्रशासनले निभाइरहेको थियो । यि दृश्यले जो कसैको मुटुमा चसक्क छुन्छ । आफूसँग अब बाँकी केही नभए पछि उनिहरू बदलाको भावमा आए अनि लाठिबोकेर आफू बसेको ठाउँ नछोड्ने अठोट लिए । त्यसरी उभिनेहरू गोलीका शिकार भए । हिजोका दिनमा पनि आतंककारीको नाममा रुकूम, रोल्पा का गाउँ–घरहरू यसरी नै जलाइएका थिए । त्यो बेला मुलुक चरम द्वन्दमा फसेको थियो । आज मुलुकमा तानाशाही शासन समाप्त भइ लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै आइसक्यो । तर तिनै युद्धकालिन दृश्यहरू सम्झाउने गरि बन्द भइसकेको घाउको पाप्रा उक्काउन किन उद्दत छ यो सरकार अनि प्रशासन ?
राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गा उपलब्ध नगराएपछि आफ्नै बलबुताले निर्माण गरेको छाप्रोलाई पनि नसहने यो कसको सरकार हो ? आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु त कता हो कता उल्टै अतिक्रमणकारी भन्दै लखेट्ने ? उनिहरूलाइ कतै सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गराएको भए सबैले चाहेको कुरा पुरा हुन्थ्यो , राज्य पनि त उत्तरदायी देखिन्थ्यो । देशको भूमिमा विदेशीले परेड खेल्दा चुँ सम्म पनि बोल्न नसक्ने, आफ्नो देशको आकाशमा विदेशी सेनाले गस्ति गर्दा हेरेर बस्ने यो सरकारले गरिबमाथि यो प्रहार किन गरिरहेछ ? लाग्छ सरकारले आफ्नो विवेक गुमाइसक्यो । उ केवल देशको ढुकुटी रित्याउन मात्र बनेको छ , जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न होइन ।
कैलालीका यि दृश्य देखे पछि मैले जीवन शर्माको गित सम्झन पुगेँ
“देशको बेहाल के सुनाउँ साथी, यो छाती पोल्दैछ
फेरी पनि हुकुमी शासन चल्दैछ , गोली चल्दैछ ।
‘बस्ने ठाउँ छैन, टेक्ने ठाउँ छैन, थाँतबास देखाइ दे ।
किनि नसक्नु बजारको मूल्य महँगी घटाइ दे । ’
भनेर ताँती लाउनेलाइ सरकार संगीनले ढाल्दैछ ,
के बताउँ खबर यो देश बेच्ने कुचाल चल्दैछ
फेरि पनि हुकुमी शासन चल्दैछ, गोली चल्दैछ ।”
Posted by वसन्त बलामी at 7:29 PM4comments:
फोहोरमा जीवनको खोजि र अरू तस्वीरहरू
सर्टकर्ट बाटोबाट बल्खु पुग्न बाग्मतीको किनारै किनार जाँदै थिएँ । ललितपुर उपमहानगरपालिका भित्रको सम्पूर्ण फोहोर अचेल त्यहीँ फ्याँकिने गरेको रहेछ । फोहोरको गाडी आएको मात्र के थियो फोहोरको लुछाचुँडी गर्न तँछाडमछाड गर्दै मानिसहरूको भिड लागिहाल्यो । जसले बढि प्लास्टिक संकलन गर्न सक्यो उसैले धेरै कमाउने । त्यसैले कोही कोही त फोहोर खसाल्दै गरेको ट्रिपरमै चढेको पनि देखेँ । अनि क्यामरा निकालेर क्लिक गरिहालेँ ।
"ए,भाइ के गरिरहेको ? " पछाडिबाट कसैले बोलाएको थियो । "फोहोरमा झुम्मिएको मान्छेको भिड देखेर फोटो खिचेको दाइ ।" उनले फेरी बोले - "त्यसो नगर्नु ।" म अलमलमा परेँ । किन र दाइ ? यहाँको फोटो खिच्न मिल्दैन र ? उनी केही बोलेनन् बरू घुरेर हेरिरहे । मैले दुइ चार वटा फोटो लिएर गइहाल्छु भनेँ । उनी चुपचाप थिए । एकै छिनमा उनी त साइडमा रहेको ट्रेन चलाएर फोहोरलाइ नदीमा झार्न पो थाले । यो काम दिनदिनै हुने रहेछ । सायद नदीमा फोहोर फ्याँक्ने यो कामबारे कतै ठूलै मिडियामा छापिने त होइन भन्ने डरले उनले मलाइ रोकेका रहेछन् । उनले मुखले त यो कुरा भनेनन् तर मैले व्यवहारबाट यस्तै चाल पाएँ । ल हेर्नुहोस् त कसरी फोहोर खसालिँदै छ नदीतिर ।
अनि यो वस्ती चाहिँ बाग्मती किनारकै नेपाली स्लमनगर ।
आन्दोलनको तस्वीर होइन यो । त्यही बाग्मती किनारकै छेउमा भएको कवाडीमा रहेको बसको अस्थि हो ।
घर जान टि.यू.बाट हिँड्दै गर्दा फूलैफूल भएको यो बाटोले पनि मलाइ तानिहाल्यो अनि यो पनि जोडिदिएँ ।
Posted by वसन्त बलामी at 3:09 PM3comments:
हिजो नेपाल टेलिभिजनमा एउटा राजनैतिक अन्तरकृयाको कार्यक्रम हेर्दै थिएँ । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापा र एकीकृत नेकपा माओवादीका चन्द्रबहादुर थापा ′ सागर ′ले गरेको तर्क सुनेर म एकछिन हाँसिमात्र रहेँ । जोक जस्तै लाग्यो । तर्क यस्तो थियो ।
गगन – माओवादी साथीहरुले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने ५ भनेको ३ भन्दा ठूलो हो तर ३ र ३ जोडेपछि ६ बन्छ । ६ भन्दा ५ सानो हो ।
सागर — काँग्रेसका साथीहरुले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने परीक्षामा पास हुन १०० मा ३२ ल्याउनुपर्छ । एकजनाले ३२ अंक ल्याएको छ र अर्कोले २५ र फेरी अर्कोले पनि २५ ल्यायो भने २५ र २५ ल्याउने दुइजनाको नम्बर जोडेर ५० हुँदैमा पास हुँदैन ।
Posted by वसन्त बलामी at 4:35 PM7comments:
Labels: वैचारिक कुनो
हरे यस्तो चाला , कहिले पो जाला
बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राखे ढुङ्ग्रो नै बाङ्गो । प्रसंग किर्तिपुरमा महिला यात्रुको लागि अलग्गै सञ्चालन गरिएको गाडि सम्बन्धि हो । महिलाहरूलाइ सुविधा होओस् भनेर अलग्गै गाडिको व्यवस्था गरिएको थियो । के गर्ने एउटा गाडि फेला पर्न आधा घण्टा भन्दा बढि कुर्नुपर्छ हाम्रा दिदि बहिनीहरुलाई । अनि हतारो हुने बेला को ,कुरीरहोस् त्यो गाडि ? जून अगाडि आयो , त्यसैमा गइन्छ । अनि केही समय पछि त्यो गाडि आउँछ । महिला यात्रु कुर्छ कुर्छ चढ्नेहरु कोही देखिँदैन । पुरुषहरु पो चढ्न आउँछन् त बाबै । गाडि खालि छ, बस स्टपमा पुरुष यात्रुको विचल्ली छ । खलासी दाजू भाइ पनि मन अमिलो बनाउँदै चढ्न खोज्ने पुरुषहरुलाई झर्न लगाउँछन् । अनि खाली गाडि हुइँकिन्छन् ।
महिला यात्रुको लागि गाडिहरुले पालैपालो समय दिनुपर्ने हुन्छ । सो समयमा भएको टिपले अरुबेलाको भन्दा आधि कमाइ पनि हुँदैन । त्यसैले सकेसम्म यि गाडिहरु आफ्नो पालो नआइदेओस् भनेर सोच्छन् । एक त यात्रुको चाप धेरै भएको किर्तिपुर सडक खण्ड , त्यसमाथि थोरै गाडि मात्र छन् । त्यसैले धेरै प्रशंसा भएको काम भए पनि महिला यात्रु विशेष गाडि सञ्चालन भइरहनेमा भने शंका छ । दुखको कुरा खलासीहरु भने त्यो गाडिमा जान हत्ते गरिरहेको देखिन्छ । पुरुष यात्रुलाइ वर्जित गरिएको सो गाडिमा खलासीहरु भने अलिमाथि ग्यारेज सम्म जाने भन्दै एउटै गाडिमा चारपाँच जना झुण्डिन आइपुग्छन् । यो कस्तो विडम्बना, जसबाट जोगिन/जोगाउन यो व्यवस्था गर्नुपर्‍यो, उनिहरुनै अघि सरिरहेछन् अहिले पनि ।
Posted by वसन्त बलामी at 9:39 AM 1 comment:
Labels: फिचर कुनो
प्रशिक्षार्थी पत्रकार अलपत्र
स्थान – गोरखापत्र दैनिकको समाचार कक्ष
समय– मध्यान्हको बाह्र बजे
" तपाइँहरु यहाँ आउनु त भयो तर , तपाईहरु पाँचै जनालाई भने लिन सक्दैनौ । तपाइँहरु मध्ये दुई जना लाइ चाहीँ लिन सक्छौं । के गर्ने सबै कलेज बाट आउनेलाई स्थान दिनै पर्‍यो । " समाचार शाखा प्रमूखको यो कुरा सुनेपछि रत्न राज्य क्याम्पसबाट दुइमहिने कार्यमूलक पत्रकारिता (इन्टर्नसिप) का लागि गएका विद्यार्थीहरु आपसमा मुखामूख गर्न थाले । यसवर्ष आर.आर. क्याम्पसमा वि.ए. दोस्रो वर्षका करिब दुइसय विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक कक्षा अन्तर्गत इन्र्टनसिपको लागि विभिन्न मिडियामा जानुपर्थ्‍यो। सोही अनुरुप पाँच जना विद्यार्थी भने सरकारी संचारमा अरु को जालान् र ? आफ्नो त इन्र्टनसिप राम्रै हुने भयो भन्ने सोच्दै त्यहाँ पुगेका थिए । गोरखापत्रको समाचार शाखा प्रमूखको यस्तो अनपेक्षित जवाफ पाएपछि उनिहरु मध्येकै एक जनाले भने– " सर हामी त धेरै मिडियाहरु भएकोले नाम चलेका ठूला निजि मिडिया हाउसमा अरु साथिहरु जान्छन् होलान् र हामीले चाही त यहीँ गर्न पाइहाल्छौँ भन्ने सोचेका थियौँ । हाम्लाइ त यहाँ आउने पहिलो समूह नै हामी होऔँला भन्ने पो लागेको थियो । हाम्रो क्याम्पसबाट अरु पनि आइसके र सर ? " " होइन, तपाइँको क्याम्पसबाट त अरु आएका छैनन् तर निजि कलेजकाहरु पनि त आउनेछन् नि । सबैलाई त ठाउँ दिनै पर्यो" नि होइन र ? " अब त आफूमध्ये दुइजनाले मात्र इन्टर्नसिप गर्न पाउने भइयो भन्ने कुरा मनमा राख्दै अन्तिममा एक विद्यार्थीले भने फ्याट्ट भनिहाले – " सर हामी पनि सरकारी क्याम्पसका विद्यार्थी, अनि यो पनि सरकारी मिडिया भएकोले सरकारी क्याम्पसलाई त बढि प्राथमिकता दिनुहुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ ।" यो कुरा सकिएको मात्र थियो । त्यहाँ उपस्थित पत्रकार मध्येकै पाका व्यक्तिले कडा स्वरमा भने – "आर.आर. क्याम्पसको ठेक्का लिएका छौँ र हामीले ? आए जति सबैलाइ लिनैपर्ने ? " उनि आफ्नै सुरमा बर्बराउन थाले – "यो क्याम्पसले सधैँ यस्तै गर्छ । कुनै पनि साल उसले हामीलाई सोधेर विद्यार्थी पठाएन । भत्ता खाने बेला उनीहरु हामी चाहीँ दुख मात्रै पाउने ? फेरी विद्यार्थीलाई नम्बर दिन पनि कन्जुस्याइँ गर्छ त्यो क्याम्पस ।"
त्यहाँ बाट निस्किएपछि विद्यार्थीहरुको मथिङ्गल घुम्न थाल्यो । साँच्चै क्याम्पस (पत्रकारीता विभाग) ले त उनीहरुसँग त केही कुरा नै गरेको थिएन नि । मिडियाको नाम लेख्ने ठाउँ खाली भएको अग्रिम तयार भइराखेको पत्र फोटोकपि (पसल) मा किन्न लगाएर कुन मिडिया (संचार माध्यम) मा जान मन छ त्यसकै नाम भरेर त पठाइएको थियो नि ।
ति पाँच जनाको मात्र होइन अधिकांश विद्यार्थीको इन्टर्नसिप अनुभव यस्तै रह्यो । यि अनुभव साटासाट गरिरहँदा रामकृष्ण नामका विद्यार्थीले भने –" हेर्नुस् म त अहिले सम्म तिनवटा मिडियामा गइसकेँ । पहिला हिमालय टाइम्स पत्रिकामा गएँ , त्यहाँ चित्त नबुझेर एउटा साप्ताहीक पत्रिकामा गएँ अहिले रेडियो उपत्यकामा गर्दैछु ।" उनले यो पनि भने की कान्तिपुर, अन्नपूर्ण जस्ता ठूला मिडियाले त नजिकका मानिसलाई मात्र इन्टर्नसिपको मौका दिन्छन् रे । अनि राजधानी, समाचारपत्रले चाहिँ विद्यार्थीबाट पाँच पाँच सय रुपैयाँ उठाएर मात्र इन्टर्नसिप गर्न दिन्छन् । उनको कुरामा अर्को एक विद्यार्थीले भने – " हो त नेपाल टेलिभिजनमा त इन्टर्नसिपको लागि झन् एक हजार रुपैँयाँ लिन्छन् रे । हामीले कसैलाई रोजगारी नै त मागेका होइनौ नि, हामी त बेतलबी रुपमा समाचार संकलनमा दुइ महिना काम गर्ने पो भनेको त । हामीलाइ भत्ता दिनु त कता हो कता उल्टै हामी सँग पैसा लिने यो त अति भो नि यार ।" यो कुरा सुनिरहेका प्रमोद दंगालले सुनाए – " हेर्नुस् ,म इन्र्टनसिपको लागि उज्यालो नाइन्टी एफ.एम.मा गएको थिएँ । बिहान टेम्पो चढेर एफ एम को अफिसमा पुगियो । त्यसपछि समाचार संकलन गर्न पठायो । एकै दिनमा मेरो बस भाडामै सय रुपैँयाँ खर्च भयो । त्यसपछि त्यहाँ जानै छोडेँ । दिनको सय रुपैँया खर्च कहाँ बाट पैसा पाउनु ?"
कुरा अब अर्कै प्रसंगमा मोडियो । के स्वतन्त्र रुपले सबैले पत्रकारिता गर्न पाएका थिए त ? खै सोचे भन्दा धेरै नै फरक रहेछ मिडियाका काम त । कतै समाचारलाइ धेरै नै काँटछाँट गर्ने गरेको पाइयो । एउटा एफ एममा त प्रशिक्षार्थी पत्रकारलाई भोलि के बारे रिपोर्ट ल्याउँछौ भनेर सोधेको र भोलिपल्ट अघिल्लोदिन जसले सोध्यो उसले नै सोही विषयमा रिपोर्ट तयार गरेर बजाइसकेको हुन्थ्यो । पत्रकारिताका यि विद्यार्थीलाई त नयाँ विषय पाउन पो प्रयोग गरे त । के यो विद्यार्थीको श्रम शोषण होइन ?
यसवर्ष मात्र होइन प्रत्येक वर्ष पत्रकारिताका विद्यार्थीले भोग्ने गरेको तितो यथार्थ हून् यि घटना । पत्रकारिता पढेर भोलिका दिनमा यसैलाइ पेसा बनाउने सोचेका धेरै विद्यार्थीको दुइ महिने अभ्यास यस्तै अलमलमा वित्ने गरेको छ । यस्तो अनुभवले तिनको भविष्य के हुने हो ? अनि कस्तो हुनेछ नेपाली पत्रकारिताको भविष्य ? संचार माध्यमका साधनको संख्या जति थपिँदा पनि स्तरीय नहुनुको कारण हाम्रो यस्तै सिकाइले गर्दा त हो नि । यसबारे सरकार, सम्बन्धित शैक्षिक संस्था, र नेपाली संचार माध्यमहरूले समयमै ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।
Posted by वसन्त बलामी at 2:43 PM 1 comment:
Labels: पत्रकारिता महात्म्य
कलियुगमा खराउ यात्रा
कालिमाटीमा हिँड्दै थिएँ । टक टक आवाज निकाल्दै नजिकै हिँडीरहेको एक जनामा मानिसको गोडा निकै छिटो छिटो बढिरहेको देखेँ । गोडामा हेरेँ उनि त काठको खराउ पो लगाएरर हिँडिरहेका रहेछन् । ओहो, कलियुगमा खराउ लगाएर यात्रा ! अनि त्यो मानिसलाई रोकेरै तस्वीर खिचिहालेँ ।
भारतको विहार राज्यको बेतिया जिल्लाका उनको नाम रहेछ पं.श्रीकान्त चौवे । उमेर ५८ वर्ष । उनि ज्यतिष एवं पण्डित रहेछन् । खास गरि कालिमाटी देखि कुलेश्वर ,बल्खू सम्म रहेका भारतिय मूलका फलफूल व्यवसायिका प्रमूख ब्राम्हण रहेछन् उनी । उनीहरुको जन्म देखि मृत्यू सम्मका सबै संस्कारमा उनको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ रे । आफ्नो काम सँगै आफ्ना जजमानहरु अमेरिका सम्म पनि छन् भनेर गफ दिन भ्याइहाले उनले । तर मेरो उदेश्य भने खराउ संवाद गर्नुमात्र थियो , उनको जजमान पौरख सुन्नु थिएन । त्यसैले सिधै सोधेँ किन खराउ लगाउनु भएको ? यो लगाएर हिँड्न अप्ठ्यारो हुँदैन ? उनको जवाफ थियो – “हेर्नुस् भाइ यो एकदम शुद्ध हुन्छ । पूजाकोठामा पनि यहि लगाइ हिँडे हुन्छ । छालाको जुत्ता लगाइ मन्दिर जानुहुँदैन तर हेर्नुस् यो जहाँ गए पनि फुकाल्नु पर्दैन । ” यसको फाइदा यहि शुद्धता मात्र हो की अरु पनि छन् त ? उनी धारा प्रवाह खराउको महिमागानमा उत्रिए – “यो खराउ लगाएर हिँडेपछि रक्तचाप बढ्दैन्, तपाइँको आँखा पनि सँधै स्वस्थ हुन्छ । मैले यो लगाएर हिँडेपछि कहिले पनि बिरामी परेको छैन ।” कति भयो यो लगाउनु भएको ? “अठार वर्ष देखि लगातार यसैमा हिँडिरहेको छु । हिँड्ने मात्र होइन, साइकल चलाउँदा, मोटरसाइकल चलाउँदा पनि यहि लगाउँछु । मसँग अरु जुत्ता नै छैन । ”
उनको दुवै गोडाका औँला हेरेँ । केवल बुढी औँला र चोर औँलाले च्यापेको भरमा उनी सजिलै हिँड्दा रहेछन् । काठको सानो ठोस्काको भरमा सिँगो खराउ उचाल्दा दुख्दैनन् त औँला ? “ दुख्दैन । अहिले त बानि नै परिसक्यो नि । ” देखेँ, उनको दुवै गोडाका औँला किसानको हातमा कोदालो चलाउँदा उठेका ठेला जस्तै कहिल्यै नदुख्ने गरी साह्रो भइसकेका थिए । कसले सिकायो त यो लगाउन ? “ अयोध्यामा वैदिक शास्त्र पढ्दा देखिनै सुरु गरेको हो यो लगाउन । म गुरुकुलमा पढेको मान्छे हूँ । त्यहाँ सबैले चाहेर पनि नचाहेर पनि यहि लगाउनु पर्ने बाध्यता थियो । बिचमा केहि समय लगाइन तर अहिले यहि नै सजिलो छ मलाइ त ।” कति रुपैयाँमा पाइन्छ त यो ? “ यो बजारमा किन्न त कहाँ पाउनु नि । सिकर्मीलाई अर्डर दिएर बनाउन लगाएको हो । एक जोडीलाई पाँच सय रुपैँयाँ पर्छ । तर नेपालको सडकमा यो तीन महिना भन्दा बढी टिक्दैन । घाम पानी त्यसमाथि सडकमा खाल्टा खल्टीमा जमेका पानी , यसले गर्दा यो धेरै टिक्दैन ।”
पाइतला टेक्ने काठको,औँलाले च्याप्ने ठोस्को पनि काठकै अनि तलको सोल पनि काठकै,त्यसमाथि हिँड्दा पनि छालाको ड्यामबुट लगाए भन्दा ठूलो टक टक आवाज । गज्जब छैन त खराउ !
Posted by वसन्त बलामी at 8:12 PM No comments:
महिलाका लागि छुट्टै बस
किर्तिपुर–रत्नपार्क चल्ने हाइस (माइक्रोबस)ले महिलाका लागि मात्र छुट्टै बसको व्यवस्था गरेको छ । व्यावसायी संघले हाल परिक्षणको रुपमा बिहान ९ देखि ११ र साँझ ४ देखि ७ बजेसम्मका लागि बस संचालन गरेको जनाएको छ ।
Posted by वसन्त बलामी at 2:44 PM No comments:
Labels: समाचार कुनो
भैरव अर्यालका कविता
प्रसिद्ध व्यङग्यकार भैरब अर्यालले कवितामा पनि कलम चलाएका छन् भन्ने मलाइ थाहा थिएन । उनका केही कविता पढ्ने मौका मिलेकोले आज गाइजात्राको अवसर पारेर उनको व्यङग्यात्मक कविता यहाँ राखेको छु ।
अस्पतालको सगाल पलङमा
सेतो सुकिलो ओच्छ्यान पाइ
नयाँ रोगि रम्दछ पहिले
खोल र तन्ना सुम्सुम्याइ
अहा ! कस्तो सफा विच्छौना,
हातको मयल पनि सर्ला जस्तो
कति नरम औ कति मनोरम
खोपि भित्रको शैय्या जस्तो ।
तर जब ओल्टेकोल्टे गर्दा
तन्ना खोल अलि सर्न जान्छ ,
अनि रोगीको आँखा सहसा
भित्री तहमा पर्न जान्छ ।
ती सुकिला खोलहरू भित्र
कति थाङ्ना ती सिरह डसना
सयौं वर्षको अवशेषपना
छ्या! छ्या!! देख्दै डुङ्ग गनाउने
पीप रगतका टाटैटाटा
जति पल्टायो उति घिन लाग्दो
दिशापिशाबले कुहिँदा पाटा
देख्दछ जब यो रोगि
अनि पो खुल्दछ उसमा भित्री पोल
नब्य झैँ लाग्ने, भव्य झैँ लाग्ने,
ओछ्यान रहेछ केवल खोल
दारा किट्छ अनि त्यो रोगि
चिच्याउन लाग्छ च्यात्तै खोल
खोल खोलमै कति दिन धान्छौ
जगजीवनको मोल ।
तर नारी समाइ भन्दछ डाक्टर
छैन यसको ब्रेन कन्ट्रोल
अनि धाइले प्याइदिन्छे
मुसुक्क हाँस्तै रङ्गिन झोल ।
′ म ′ माने एउटा मेच
एउटा आसन एउटा अडेस
तर छ एउटा महत्व विशेष
चार खुट्टा गतिशेष
तिहुन तमाखु थप
ऐजन ऐजन लम्पसार ।
Posted by वसन्त बलामी at 11:48 AM No comments:
त्यो भाडाको साइकल
बुबा मलाई देखाउँदै भन्नुहुन्थ्यो – ′ एल्लाइ साइकल चढ्न कत्रो रहर ? हाम्लाई याँ साइकल चलाउनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । ′ तिनताक म बुबाको साइकल लिएर काठमाडौँ चक्रपथ नाप्ने गर्थेँ । मलाई भने अचम्म लाग्थ्यो - ′ साइकल चढ्न पनि दिक्क लाग्छ र कहीँ ? ′ तर अचेल कहिलेकाहीँ बिहान चार बजे देखि बेलुकी आठ बजे सम्म लगातार साइकल चलाएर लखतरान भइ घर पुग्दा मलाई पनि त्यस्तै लाग्न थालेको छ ।
यहाँ म आफ्नो साइकल चढ्नुपर्दाको दिक्दारीको कुरा गर्न गइरहेको छैन । म त बाल्यकालको साइकल रहर पो बताइरहेको छु । त्यतिबेला म ७,८ वर्षको थिएँ । त्यसबेला गुच्चा, चुंगि, अनि साथिहरूसँग चप्पल फुकालेर नाप्दै उफ्रने खेल, टायर गुडाउने खेल खेलिन्थ्यो । पैसा हुनेहरू भने साइकल चलाउँथे भाडाको । हामी बसेको ठाउँ भन्दा अलि माथि स -साना साइकलहरू भाडामा दिइन्थ्यो । साइकल अवस्था हेरी भाडा फरक–फरक थियो । त्यहाँ ब्रेक, घण्टी केही पनि नभएको साइकल समेत थियो । ब्रेक नभएको साइकल एक रुपैयाँमा पौने एक घण्टा चलाउन पाइन्थ्यो भने ब्रेक भएकोलाइ तिन रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो।
एक दिन मैले बाटोमा एक रुपैयाँ भेट्टाएँ, त्यसपछि म पनि अरु साथिभन्दा स्ट्याण्डर्ड हुन साइकल लिन गएँ भाडामा । त्यस दिन राम्ररी घाम लागेको थिएन । आकाशमा बादल लागिरहेको थियो । पानी परीहालेको पनि थिएन । साइकल लगुँ की नलगुँ केही बेर दुविधा भयो । तर बल्ल तल्ल एक रुपैयाँ हात लागेको छ , यही मौका हो साइकल चढ्ने भनेर साइकल लिएँ । त्यहाँ न घण्टी थियो न त दुबै पाङ्ग्राको ब्रेक नै । सानो साइकल अनि सानो म । भुइँमा छुने हुँदा खुट्टाले नै ब्रेकको काम गर्थ्यो । साइकल लिएर चलाउन थालेको केही समय मात्र भएको थियो , पानी पर्न थालिहाल्यो । अब के गर्ने ? पैसा दिएर साइकल ल्याइ नै सकेँ समय नसिद्धिँदै फिर्ता लगेर आफ्नो पैसा फिर्ता पाइने होइन । चलाउन भनेर ल्याएको साइकल कतै थन्क्याउने कुरा पनि त भएन । अरु सबै साथीहरू गइसकेका थिए म भने यस्तै सोचेर पानी मै साइकल चलाइरहेँ । स्पीड बढि भएछ की के हो साइकल मोड्न लाग्दा बेस्सरी पछारीन पुगेँ । साइकल एकातिर ढल्यो म बाटोमा घिस्रिन पुगेँ । त्यसपछि त केही नसोचि तुरुन्तै साइकल फिर्ता गर्न गएँ र कोठामा लागेँ । कोठामा जाँदा जाँदै टाउको पनि भाउन्न भए जस्तो भयो । कोठा पुगेपछि पो देखियो लुगा पुरै पानी र हिलोले भिजेको । जिउको एकापट्टिको भाग पुरै खुट्टा देखि हात अनि अनुहारको गालासम्म नै पिलपिल रगत पो आइरहेको रहेछ । साइकलबाट लड्दा घिस्रिएर गएकोले पाइन्ट पनि च्यातिएको थियो । तर मलाई त्यसबेला लडेर भएको पिडा भन्दा पनि बल्ल तल्ल भेट्टाएको पैसाले पनि पुरै समय साइकल चलाउन नपाएको पिडा ठूलो थियो । आमा बुबा र दाइहरु क–कसले के के भने मलाइ याद छैन । तर त्यो घटना पछाडि भाडामा साइकल खेल्ने काम पुरै बन्द भयो ।
अचेल स–साना भाइ बैनीहरू साना साइकल वरीपरि झुम्दै खेलिरहेको देख्दा मलाई पानीमा रुज्दै साइकल चलाएको त्यो क्षण याद आइहाल्छ ।
Posted by वसन्त बलामी at 11:05 PM 1 comment:
Labels: आत्मकथा, आफैँसँग
Being Me हेरेपछि
यसपल्ट खुल्ला सडकमा बसेर being me नामक चलचित्र हेरियो । किर्तिपूरको नयाँ बजारमा पर्दा राखेर यो चलचित्र देखाइएको थियो । यसरी खुल्ला सडक बिचमा चलचित्र हेर्न पाउँदा मन नै रोमाञ्चित भइरहेको थियो । यो चलचित्र हर्के फिल्मस् र डकुमेन्ट्रि ओपन स्कूलले संयुक्त रुपमा बनाएको रहेछ । चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि ‘ के बारेको चलचित्र हो यो ? ’ भन्ने प्रश्नमा यसका निर्देशक क्षितिज अधिराजले यसरी उद्घोषण गरेका थिए — “यो चलचित्र तपाइँहरूको बारेमा बनेको छ ।” “सामान्यतयाः चलचित्रले के कुरा भन्छ ? चलचित्र सकिएपछि थाहा हुन्छ र अझ धेरै जसो त सकिएपछि केही कुरा पनि आउँदैन । हेरिसकेर आ–आफ्नो बाटो लागे पछि यसको प्रभाव पनि सकिन्छ । तर हामी चलचित्र भनेको यति मात्र होइन, यो त तपाइँ सँग बोल्ने(संवाद गर्ने) हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यसैले प्रस्तुत चलचित्र पनि हेरिसके पछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् । हेरिसकेपछि तपाइँको मनमा जे कुरा आयो त्यही नै हो यो चलचित्रको थिम (चलचित्रले भन्न खोजेको कुरा ) । हामी चलचित्र सकेपछि बाहिरीने होइन, बहसको सुरुवात होस् , छलफल होस् भन्ने चाहन्छौँ । अर्थात् चलचित्र यति गह्रुगोँ चिज हो , जसले तपाइँलाई पनि बोल्ने बनाउँछ । यो सस्तो चिज लाग्दैन हामीलाई । त्यसैले यो हेरेपछि जस्तो लाग्यो त्यस्तै कुरा यहाँ लेखेर व्यक्त गर्नुहोला ।”
अनि सुरु हुन्छ चलचित्र प्रदर्शन । चलचित्रमा सुत्रधार बोल्छन् – ‘ यो कथा कल्पनाको होइन , यो त हाम्रै गाउँठाउँको कथा हो । हामी सबै शान्ति चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ । यसको मतलब यो कथा युद्ध सकेर शान्तिकाल आयो भन्ने पनि होइन । ’
घटना (दृश्य) – १ दाङमा एउटा ज्योतिष÷झाँक्री को मा आउनेहरूको हूल महसुस हुन्छ । एक युवा आफ्नी आमासँग आएका छन् । झाँक्री तिनलाई हेर्छन् । ग्रहदशा भन्छन् अनि एउटा पात जस्तो (मैले प्रष्ट ठम्याउन सकिन) दिन्छन् र दुईऔंलाले माड्न लगाउँछन् । त्यसपछि आफ्नो हातमा केही छैन भन्दै हात देखाएर दुइवटा हात माड्छन् र टिका लगाइदिन्छन् ती युवाको निधारमा । तिनलाई ऐनामा हेर्न लगाउँछन् , अनि दंग पर्छन् केही नभएको हातले टिका लगाइदिँदा । क्यामरासँग तिनी आफुलाई यस्तोमा विश्वास नभएको केवल आमाको सन्तुष्टिको ÷ शान्तिको लागि यहाँ आएको बताउँछन् ।
घटना (दृश्य) – २ कर्णाली जिल्लाको एक विकट गाउँमा एक तपस्वी जमिन मूनि छिर्छन् र (सायद) केही दिनपछि निस्कन्छन् । त्यसपछि जमिनमूनि बाट निस्कीएका उनलाई भगवान् मानेर पूज्न थाल्छन् गाउँलेहरू । तिनको सहयोगी उनलाई भगवान् त होइन तर महामानव चाहीँ भएको जिकिर गर्छन् ।
घटना (दृश्य) – ३ एक युवती आफ्नो भान्छामा बँदेलको मासु पकाउँछिन् । पाक शिक्षा दिए जस्तै गरि प्याज भूट्ने, खुर्सानी हाल्ने, मासु हाल्ने, मसला हाल्ने देखि खाना सँग पस्कनेसम्म देखाइन्छन् । उनी विदेशमा काम गरेर फर्केकी । अरबमा जाँदा अनौठो अनुभव भएको बताउँछिन् । आइमाई मान्छेले बाहिर फेर हिँड्न नहुने । लुगाले मूख बाहेक सबै ढाक्नुपर्ने । आपूmले पनि त्यसै गरिन् । पछि मालिकको छोराले दुर्व्यवाहार गरेपछि आमाचाहीँलाई भन्दा उल्टै गाली खाइन् । यति मात्र कहाँ हो र ? त्यसमाथि मालिकले पनि पिट्यो । कहिलेकाहीँ उनलाई नारी भएर बेकार जन्मिइएछ भन्ने लाग्छ । यो सबै कुरा क्यामरालाई बताउँछिन् ।
घटना (दृश्य) – ४ तराईको दृश्य, म्यानपावर कम्पनीमा युवाको भिड । ल्याप्चे हान्दै आफ्नो नागरीकता बुझाएको देखिन्छ । म्यानपावर कम्पनीको मान्छे उनीहरुलाई काम सम्झाउँछन्– ‘ त्यहाँ गएर गाडी चलाउने हो , २४ पाङ्ग्राको गाडि । १२०० सय आउँछ । उस्तै परे १६०० सम्म कमाइ हुन्छ । फेरी खान, बस्न पैसा लाग्दैन । ’ युवा सहमत हुन्छन् । पछि भिड बीचमा नाम बोलाउँदै पासपोर्ट बाँडिन्छ । यहि बीचमा सडकमा रिक्सामा हिन्दी चलचित्रको प्रचार अनि हल सम्मको यात्रा देखाइन्छ । यो भने बुझ्न सकिंन ।
घटना (दृश्य) – ५ एक युवती , अनुहार देखाइन्न । तर पछाडिबाट खिचिन्छ , उनी हामीलाई आफ्नो डायरी भन्छे – ‘ म बारमा काम गर्छु । छ बजे देखि ६,७,८,९,१० बजे सम्म, बारमा मेरो काम सर्भिस दिने हो । ग्राहकहरू धेरै चिज पाउन चाहन्छन्, त्यो कुरा दिनुपर्छ हामीले ’ यसरी बोलिरहेकी महिलाको पछि लाग्दै क्यामरा बार सम्म जान्छ । तर कसैको मूख देखाइँदैन ,केवल खुट्टामात्र खिचिएको छ । सबै दृश्य सँगै युवतीले आफ्ना कुरा बताइरहेकी नै हुन्छे । लहरै तिन चार जना केटीहरू बसेका छन् । “के दिन खोज्या होला ?” भन्दै मूख छोपेकी एक महिला स्वाभाविक हाँसो हाँस्छिन् । उनलाइ अचम्म पनि लागेको छ । आफूले काम गरेको ठाउँमा के गर्न खोजेका हुन् ? आफूलाई त सबै नर्मल छ तर के देखेका होलान् यिनले ? यस्तै भाव देखिन्छ उनको हाँसोमा ।
घटना (दृश्य) – ६ पशुपति मन्दिर परिसरमा धार्मिक प्रवचन÷अनुष्ठान चल्दैछ । जहाँ भजन गाइँदैछ । नदी छेउ लासहरू जलाइरहेको देखिन्छ , सँगै अर्को दृश्य : एउटा कुखुरा क्यामरा नजिक देखिन्छ । अर्को कुखुरालाई पूजाको निम्ति काटिँदैछ । जसलाई काटिएको, भूत्ल्याइएको, सफा गरेको र निर्जीव शरिर तुल्याइएको सम्म देखाइन्छ । यो दृश्य र भजन किर्तनको दृश्य एक र अर्को गरी पालैपालो देखाइँदै गरिएको छ ।
अन्त्यमा, गित घन्किन्छ
“चिङकाङसाङ हो यो विश्वक्रान्तिको, आधारकिल्ला हो यो जनक्रान्तिको
हाम्रो नेपाल, प्यारो नेपाल,विरहरूको नेपाल,विरहरूको नेपाल”
यो गित बजाइँदै गर्दा पर्दामा नेपालीहरूको तस्वीरहरू देखाइन्छन् । कसैको हातमा बियरको शिशि हुन्छ । कोही महिलाका अनुहार चाउरिएका छन् र सिद्धिन्छ being me । चलचित्र हेरिसकेपछि मनमा एक प्रकारको अलमल पो पैदा भयो । टुक्रा टाक्रीहरु जोडेर बनाइएको रहेछ यो चलचित्र । त्यसमाथि एउटै घटना पनि सिधा पूरा नहुने ÷सिलसिलाबद्ध नहुने । एकपटक ,एउटा घटनाको दृश्य अनि अर्को पल्ट अर्कै घटनाको दृश्य त्यो पनि अपूर्ण । मैले माथि उल्लेख गरेका प्रत्येक घटना झण्डै तिनपल्ट देखाएपछिमात्र पूरा हुन्छ ।
यस्तै प्रस्तुती शैलीको चलचित्र babel हेरेको थिएँ करीब एक वर्ष अघि । मलाइ लाग्छ कम्तिमा एउटा घटना पनि सूरु देखि अन्त्य सम्म बिना अबरोध हेर्न पाए अझ चलचित्र बुझ्न सजिलो हुने थियो की । मैले त्यहाँ उपस्थित प्रायः सबै दर्शकको पनि यस्तै अलमलको मनस्थिति पाएँ । यहाँ अन्त्यमा कुखुरा काटिएको र भजन किर्तनको दृश्य पालैपालो देखाइयो । के पंक्षी हत्या धर्म विपरित छ भन्न खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्देशक क्षितिजले यसो भने –“होइन , यो चलचित्रको कुरा यतिमा सिमित छैन । यो चलचित्रमा देखाइएको पहिलो दृश्य र अन्तिम दृश्य अन्तरसम्बन्धित छ । यसलाई तपाईँले आफ्नो कथा सम्झीनुभयो की भएन ? मूख्य कुरा त्यही हो ,। आफूलाई यहाँ भित्र कतै पाउनुभयो की भएन ? बस्, तपाइँ यहाँ देखिनुभयो भने हामी सफल भयौँ । ” बल्ल पो अलिअलि चलचित्र बुझेजस्तो भयो । अनि लाग्यो अब फेरी एक पल्ट हेर्नपाइयो भने चाहिँ अझ गाढा सँग बुझिने थियो भनेर । आयोजकहरू भन्ने थिए – ‘ व्यावसायिक चलचित्र होइन यो , अनि हाम्रो उद्देश्य पनि पैसा कमाउने होइन । हामी त टोल–टोलमा यस्ता सामाजिक कुरामाथि बहस सिर्जना गर्न चाहन्छौँ चलचित्रको माध्यमबाट । ’ चलचित्रलाई केवल मनोरञ्जनको सस्तो साधनमात्रै मानिआएको नेपाली बजारमा यो तहको ओजपूर्ण विचार लिएर आएकोले यो वास्तवमै प्रसंसनिय कार्य हो । यसरी टोलटोलमा देखाइने चलचित्रहरु अझ सरल भइदिउन् , आयोजकहरू आफ्नो उद्देश्य प्राप्तीमा अघि बढून् ।
Posted by वसन्त बलामी at 8:05 PM 1 comment:
Labels: रंग कुनो
बलामी भेला सम्पन्न
देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका बलामी जातिको अधिराज्यव्यापी भेला सम्पन्न भएको छ । गत शनिवार आयोजित उक्त भेलामा नुवाकोटको कागती गाउँ, मकवानपुरको चित्लाङ, खड्बु, काठमाडौंको बालाजु, रामकोट, फर्पिङ लगायत विभिन्न स्थानबाट आएका बलामीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । सोही भेलाले मोहन बहादुर बलामीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय तदर्थ समिति पनि गठन गरेको छ ।
नेवार जातिभित्र आफ्नो छुट्टै भाषा, संस्कृति भएर पनि पछाडि परेको एउटा समुदायको हो बलामी समुदाय । यसपल्ट विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका बलामी समुदायलाई एक गराउने काम नेपाल बलामी समाजले गरेको छ । समाजले आपसी सम्बन्ध मजबुत बनाउन, आफ्नो मौलिक संस्कृतिको पहिचान गरी जगेर्ना गर्न, समाजिक विकृति र अन्धविश्वास हटाउन, आफ्नो हकहितको संरक्षण गर्न यो भेला आयोजना गरेको बताएको छ ।
Posted by वसन्त बलामी at 2:16 PM No comments:
बहस हुनैपर्छ अब त
राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो १० दिने संघियता विरोधी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सम्पन्न गरेको छ । यो आन्दोलनले ठूलो उपलब्धी बटुल्न नसके पनि कम्तिमा पनि शिक्षित वर्गका मानिसहरू देखि सर्वसाधारणमाझ पनि कुराकानीको विषय बनाउन सकेको देखेँ मैले ।
संधियता भनेको के हो ? संघिय राज्य बनाउँदा फाइदा हुन्छ की बेफाइदा ? कहाँ बाट आयो संघियताको नारा ? क्याम्पसमा राजनितिशास्त्रको कक्षामा आजभोली यस किसिमका छलफल सुरु हुने गरेको छ । हाम्रा प्राध्यापकले हामीलाई यसरी बुझाउनु भएको थियो– ‘ हिजोका दिनमा राज्यको ध्यान राजधानी जस्ता सिमित शहरी इलाका मात्र केन्द्रित थियो जसले गर्दा यस क्षेत्रमा वसोबास गर्ने जनताको जीवनस्तरमा एकाएक परिर्वतन आएको छ भने अर्को तिर हुम्ला, जुम्ला , कर्णाली जस्ता क्षेत्रलाई राज्यले सौताको छोराको व्यवहार गर्न पुग्यो । त्यसैले त्यहाँ सधैँ भोकमरीले सताउँछ । शिक्षा कुन चराको नाम हो त्यहाँका जनतालाइ थाहा छैन । वास्तवमा दश वर्षे माओवादी जनयुद्धबाट संघियताको नारा उर्लिएको देखिन्छ । झन् दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि त सबै वर्ग र तप्काका मानिसहरु आफ्नो अधिकार खोज्ने भएका छन् । वास्तवमा केन्द्रिकृत राज्य संयन्त्रले देशको चौतर्फी विकास गर्न नसकिएकोले नै क्षेत्रीय रुपमा पनि अधिकार बाँडफाँड हुनपर्छ , जहाँ बाट कर उठ्यो त्यहीँकै विकासको लागि खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको हो । ’
संघियताबारे यी कुरा सुनिसकेपछि ‘अहिले संघियताले देश टुक्¥याउँछ ।’ भनेर त्यस विरुद्ध आएको आवाजको अर्थ चाहिँ के हो नि ? मनमा झनै बढि दुविधा पो भयो त । यसलाइ यसरी बुझेँ मैले — कुरा के रहेछ भने अहिले देशमा संघियताको ढाँचा कस्तो हुने भनेर सबैलाइ चित्तबुझ्दो खाका नै तयार नगरिकन बाठा मानिसहरु मिलेर आफ्नो बाहुबल भएको क्षेत्रलाइ छुट्टै राज्य घोषणाको माग गर्ने चलन पो बढेर गएछ त । लौ यसले त देश नै टुक्रा टुक्रा हुने भयो भनेर संघियताको विरोध पनि हुने गरेको छ । के संघियता भनेको देश टुक्राउनु हो त ? अवश्य पनि होइन । संघिय राज्य भएर नै विशाल भारत बनेको छ । अरु त के कुरा अमेरीका नै पचास भन्दा बढि संघिय राज्य मिलेर सिंगो बनेको छ । अनि संघियताको नाममा यो विवाद किन त ? देश अनुसार भेष भन्छन् नि , संघिय राज्य बनाउँदा के को आधारमा भूगोललाइ विभाजन गर्ने ? के को आधारमा अधिकार बाँडफाँड गर्ने ? यिनै कुराले नै संघिय राज्य कस्तो हुने भन्ने तय हुने त हो नि ।
अहिले अधिकांश ठूला स्वरहरू जातजातीको आधारमा संघिय राज्य बनाउने भन्ने आइरहेको छ । के यो उपाय सही छ त ? मैले काठमाडौँका ठाउँ ठाउँमा नेवारी भाषाको एउटा नारा देखेको छु ‘ नेवा झि गुलि शाषित जुइगु ? आ ला झि शाषक जुइनु ’ यसको अर्थ हो – ‘ हामी नेवारहरु आफ्नो भूमिमा कति अरुबाट शाषित हुने ? अब त हाम्रो शाषक हुने पालो पो हो । ’ देशमा जातको आधारमा संघिय राज्य बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको नारा हो यो । खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाको पूरानो बासिन्दा आफूहरु भएको र यहाँ आफूहरुले नै शाषण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा अचेल कतिपय मानिसहरुमा पाइन्छ भने कतिपय ‘३० प्रतिशत नेवारहरुले हामीलाई शाषण गर्ने ? ’ भन्दै नाक खुम्च्याउनेहरू पनि छन् । तराईमा पनि कोही पूरै तराइलाइ मधेश बनाउनुपर्ने भनिरहेका छन् भने कोही आफूलाई त्यहाँको भूमिपूत्र भएकोले आफुले छुट्टै शाषण गर्न पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । यो सबै कुरा छलफल र बहसमा मात्र भए त ठिकै थियो । यहाँ त भिन्न जाति बिच द्वन्द नै पो हुन थालेको छ । अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको खाका तयार गर्नु अगावै देखिएका यस्ता द्वन्द देखिनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन है । संघियताको नाराले गर्दा मानिसहरुमा साम्प्रदायिकता पो बढ्दै छ । यदि भूगोल जोडिएर मन फाट्न पुग्यो भने यो एकता हुँदै होइन अनि यदि भूगोल छुट्याउनकै लागि (साम्प्रदायिक) मनहरु जोडिए भने त्यो त झन् भयंकर हुन पुग्छ । त्यसो भए कसरी गर्ने त देशको विकास ? विकेन्द्रिकरण त गर्नु नै छ । के संघियता घात नै हो त ? के हामी बिच जोडिने साइनो जातियता मात्रै हो त ? बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ अब , छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ अब ।
Posted by वसन्त बलामी at 6:54 AM 1 comment:
बहुप्रतिक्षित 'नागरिक' दैनिकको प्रथम नमूना अंक आज नेपाली बजारमा आएको छ भने नियमित रुपमा चाहिँ वैशाख ११ गते, लोकतन्त्र दिवसको दिनदेखि आउने भएको छ । यो पत्रिका महँगा पत्रकारहरुको दरिलो समूहको रुपमा प्रचारित नेपाल रिपब्लिक मिडियाबाट प्रकाशित भएको हो । नेपाली दैनिक नागरिकका साथै अंग्रेजी दैनिक Republica को नमुना अंक पनि आजै प्रकाशित भएको छ । धेरैतिरका नाम चलेका पत्रकारहरुलाई जम्मा पारिएकोले यो पत्रिकाले नेपाली पत्रकारिता जगतमा राम्रै तहल्का मच्चाउने आशा गरिएको छ ।
Posted by वसन्त बलामी at 1:54 PM No comments:
करिब एकहप्ता इन्टरनेटबाट टाढा हुनुपरेको थियो , चाहाना होइन बाध्यताले गर्दा। नेपाल टेलिकमको प्रशारण लाइनमा समस्या आएको रहेछ। दुइदिन सम्म त कीर्तिपूरमा टेलिफोन पनि बन्द भएको थियो। तेस्रो दिन देखि टेलिफोन बने पनि इन्टरनेट भने आएन। पछि नेपाल टेलिकममा फोन गर्दा ‘ अप्टिकल फाइबरको लाइन बिग्रिएको छ बनाउने प्रयास जारी छ, कहिले सम्म बन्ने हो ? ठेगान छैन ’ भन्ने जवाफ आयो।
समाचार थाहा पाउन त अनेक माध्यम भएकाले समस्या भएन तर साथिहरुका ब्लगमा यसहप्ता के के लेखिसके होलान्। मनमा कौतुहलता भइरहन्थ्यो, अरुका ब्लग चिहाउने बेचैनि पनि भइरहन्थ्यो। अनि आफ्नो ब्लगमा राख्न नपाए पनि समाचार प्रतिको रुचिले गर्दा नयाँ कुरा देखियो की त्यतैतिर लाग्ने बानी भने जारी थियो। बल्ल आज बाट इन्टरनेट सञ्चालन भयो यहाँ। त्यसैले नयाँ कुरा चाहिँ केही राख्न पाएको छैन। अहिलेको लागि कुलेश्वरमा अप्टिकल फाइबरको लाइन पूनर्निर्माण भएको तस्वीरमात्र राखेको छु।
जमिनमूनि इन्टरनेट सञ्जाल
कुलेश्वरमा अप्टिकल फाइबर मर्मत गरिँदै
यसपल्ट मैले नयाँ वर्षको उपहारस्वरूप एकहप्ता देखि अवरूद्द इन्टरनेट सुविधा पाएँ । नयाँ वर्षले सबैका आशा, चाहना पूरा गरोस् । नयाँ नेपाल कल्पनामा होइन वास्तविकतामा परिणत होओस् । नववर्ष २०६६ को सबैलाइ शुभकामना ।
Posted by वसन्त बलामी at 5:37 PM2comments:
‘अन्नपूर्णपोष्टः गजब छ’
केही समयदेखि अन्नपूर्णपोष्ट पत्रिकाले ‘अन्नपूर्णपोष्टः गजब छ’ भन्दै आफ्नो विज्ञापन तिव्र बनाइरहेकैबेला त्यही पत्रिकाको विज्ञापनमा अर्को ‘गजब’ कुरा देख्न पाइएको छ । अन्नपूर्णपोष्टको गजब छ भन्ने विज्ञापनमै झन्डै एक चौथाइ जति भागमा ‘अन्नपूर्णपोष्ट बहिष्कार गरौं’ भनेर लेखिएको देखियो । कसले किन र केका लागि बहिष्कार ?
जुनबेला भर्खर–भर्खर यो पत्रिका प्रकाशन शुरुवात भएको थियो, त्यतिखेर पनि अरु प्रतिस्पर्धी यो पत्रिका बहिष्कार गर्न पाठकहरुलाई प्रेरित गरिरहेका थिए । त्यसमाथि मिडियामा विदेशीको लागानी भनेर पनि ठाडै विरोध भएको थियो यसको । यी त पुराना कुरा भए । तर अहिलेको यो बहिष्कार किन त ? (हेर्नुहोस् तस्वीर)
यसपल्ट अन्नपूर्णपोष्टको प्रकाशन संस्था आप्का हाउसमा मजदुर आन्दोलन सुरु भएको रहेछ र उनीहरुको आन्दोलनको पहिलो स्वरुप नै ‘अन्नपूर्णपोष्ट बहिष्कार गरौं, नबेचौ, नकिनौं र नपढौं’ भन्दै प्रचार गर्नु रहेछ । पहिला पनि धेरै पटक आप्कामा मजदुर आन्दोलन भएका थिए ।
‘वार्ता गरी सहमती गरेर आन्दोलन तुहाउने, तर कहिल्यै सहमती पालना नगर्ने भएकोले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको’ बताउँछन् त्यहाँका मजदुर आन्दोलनका सहभागी मजदुरहरू । मजदुर युनियनमा सक्रिय भई लागेकैले कर्मचारी माथि विना कुनै कारण निलम्बन गरेको बताउँछन् उनीहरू । पछिल्लो पटक वितरण विभागका बलराम श्रेष्ठ र हरि आचार्य यसगरी निलम्बनमा परे ।
‘आफै कार्यरत पत्रिका बहिष्कार भएमा तपाईहरुको रोजगारी त छुट्ने नै भयो नि हैन?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा दुर्गा नामका एक मजदुर ले भने ‘हेर्नुस, हामीले यहाँ परिश्रम अनुसारको सेवा सुविधा पाएका छैनौं, हामीमाथि शोषण भएको छ । शोषित हुनुभन्दा त बरु बन्दै होस् ।’ कि गर्ने त बहिष्कार अन्नपूर्णलाई ? फ्लेक्समा कारणहरु छनः
१.यो राष्ट्रियता विरोधी छ ।
२.यो मजदुरमारा र उत्पीडक छ ।
३.यो गैर कानुनी ढंगले संचालित छ ।
४.यो मजदुरको आँशु र रगतले लतपतिएको छ ।
यी कारणहरुको प्रमाण दिँदै ती मजदुरहरु भन्छन् ‘ नेपालको कानुन अनुसार संचारमा विदेशी लगानी गर्न पाइन्न तर यो विदेशी लगानीको पत्रिका हो, यहाँको कार्यकारी अधिकृत नै भारतीय नागरिक हुन् । श्रम अदालतले हामी मजदुरको पक्षमा निर्णय गरी संगठन खोल्न पाउँछ भन्छ तर यो प्रशासन विभिन्न बहाना बनाउँदै हामीलाई यो अधिकार दिन चाहँदैन अनि अर्को कुरा यो पत्रिकाले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर लेखेको थियो’ उनले पत्रिकाको मिती दिए November 21, 2003 ।
आफ्नो आन्दोलनको स्वरुपबारे बयान गर्दै उनीहरु भन्दैथिएँ ‘पहिले पहिले पत्रिका बाँड्ने साथीहरुले आन्दोलन गर्दा काम बहिष्कार गर्ने गरिएको थियो । जसले गर्दा पाठकले पत्रिका समयमा पढ्न पाउँदैनथे । अनि मजदुरले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्‍यो भनेर आप्काले प्रचार गर्ने गरेकोले यसपल्ट चाहिँ आफ्नो कामलाई जारी नै राखेर पनि आन्दोलन गर्न सकिन्छ भनेर बहिष्कारको प्रचार गरेका हौं । यो सबैभन्दा शिष्ट आन्दोलन हो । तर यो तरिकाले पनि उनीहरु सहमति पालना गर्दैनन् भने हामी अनसन बस्छौं, आमरण अनसन ।’
आप्का हाउसमा मजदुर र प्रशासनबीच दुरी बढ्दै गएपछि नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा जो अन्नपूर्णपोष्टसँग सम्बद्ध पनि छन्, उनले मध्यस्तकर्ता बनी वार्ताको पहल गरिरहेकाछन् तर सम्झौता हुन सकेको छैन । आन्दोलन र वार्ताबारे जिज्ञासा राख्दा उनले ‘यो आन्तरिक कुरा हो’ भनेर पन्छिन खोजे पनि ‘आन्दोलनको अधिकार सबैमा हुन्छ तर उहाँहरुले यसो नगरी अरु नै तरिका अपनाउनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ भने ।
तर ‘अन्नपूर्णपोष्टः गजब छ’ भन्ने विज्ञापनमै ‘अन्नपूर्णपोष्टः बहिष्कार गरौं भन्ने सुचना देखेर चाहिँ सर्वसाधारण निकै गजब मानिरहेकाछन् ।
Posted by वसन्त बलामी at 8:00 AM 1 comment:
‘पढेकाहरू स्वार्थी हुन्छन् ।’
रिक्सा चालकको जीवन कति सहज छ ? कति अप्ठ्यारा छन् यो काममा ? मानिसहरू कस्तो व्यवहार गर्छन् उनीहरूमाथि ? यीनै कुरा बुझ्ने क्रममा गएको शनिबार भेटिए काभ्रेका खड्ग बहादुर मगर, जो वसन्तपूरमा फूर्सदिलो भई यात्रु कुरीरहेका थिए । प्रस्तुत छ पेसागत कुनाको लागि यसपल्ट उनै रिक्सा चालकसँग गरिएको कुराकानी ।
के हो दाई आज शनिबार भएर खाली बस्नुभएको हो की अरुबेला पनि यतिकै सुख्खा हो ?
हामीलाई के शनिबार के को आइतबार नि यस्तै त हो नि कहिले टिप हुन्छ कहिले हुँदैन । फेरी टिप पाए पनि चलाएको चलै त कहाँ गर्न सकिन्छ र यो रिक्सा । एक दुई टिप गरेपछि त आराम गर्नु परिहाल्यो नि ।
आज कति टिप गर्नु भयो त ?
एक टिप मात्र भयो । एउटा कुइरेलाई भिमसेनथान देखि बाङ्गेमूढा सम्म लगियो ।
कति दुरीको कति लिने फिक्स छ की ?
त्यो त मान्छे हेरेर, बोक्नुपर्ने सामान हेरेर हुन्छ । यति नै लिने भन्ने छैन । अलि बुढा बुढि गरिब जस्ता लागे भने २०/३० रुपैयाँ मै पनि लगिन्छ। नभए त सकेसम्म बढि लिइन्छ ।
कति कमाउनु हुन्छ तपाईँ ?
कुनै ठेगान नै हुँदैन भाइ, उस्तै भाग्य पर्यो भने एकै टिपमा पाँच सय पनि हुन्छ । कहिले दिन भरी गर्दा पनि पचास सय पनि हात लाग्दैन । प्रायः कुहिरेहरूलाई उनीहरूको अफिस (ट्राभल एजेन्सी) ले नै यहाँ देखि यहाँ सम्म जाँदा यति डलर तिर्नु भनेर सिकाएका हुन्छन् । तै पनि धेरै जसोले पछि टिप्स पनि दिन्छ । कसैले सय रुपैयाँ, कसैले दुइ तिन सय पनि दिन्छन् । आज एउटा कुइरेले एक डलर र पचास रुपैयाँ दिएर गयो । पचास रुपैयाँ बढि कमाई भयो आज । फेरी लगातार टिप आइराखे पनि राम्रै कमाई हुन्छ । कमल भन्ने एक जना साथि छ , छाउनी बस्ने । उ हरेक दिन बिहान चार बजे रिक्सा निकालेकै हुन्छ । चारबजे कालिमाटिबाट एउटाको तरकारी पसलमा टिप गर्छ । त्यसपछि दुईवटा मासुपसलमा भ्याउँछ । एउटा चुरोट पसलको टिप पनि भ्याउँछ । दिउँसो फेरी सेल्समा लैजान्छ । दिनभरी त्यही गर्छ । अनि बेलुका फेरी ठमेल तिर जान्छ । हामी त की राती मात्र रिक्सा चलाउँछौँ की त दिनमा मात्र , उ त चार बजे निकालेदेखि राती सम्मै चलाउँछ । त्यसरी काम गरियो भने त मरिन्छ ।
कति कमाई हुन्छ त उसको ?
उल्ले महिनामा २० हजार जति त जोगाउँछ होला । हामी जस्तो खाली पनि बस्दैन, लगातार चलाउँछ त्यो । तर हामी बीचमै कोही साथि भने अफिस टाइममा मात्रै काम गर्ने पनि छन् । कोही चाहीँ हातमा एक दुई सय भयो की आज लाई कमाई पुग्यो भनेर काम नगर्नेहरू पनि छन् । मैले चाहीँ डेल्ली दुइसय रुपैयाँ फाइनान्समा राख्ने गरेको छु ।
भने पछि गर्न सक्नेले त राम्रै कमाई गर्दोरहेछन् नि । तपाईलाई थाहा छ दाजु आजभोली पसलमा काम गर्न बस्ने केटालाई महिनामा पच्चिस सय , तिन हजार तलब दिइन्छ । तिनीहरू हेरी त तपाईहरूको कमाई राम्रै हुँदोरहेछ होइन त ?
खै तिनिहरू के खान्छन् , कसरी खान्छन् ? मलाई पनि अचम्म लाग्छ । कसरी पुर्यािउँछन् उनीहरू? खाजा खाने भनेर एक कप चिया खालान् र त्यतिले पुर्याउलान् । आफ्नो त जस्तै थोरै कमाई भएको दिन पनि राँगाकै मासु भए पनि छुट्दैन कुनै छाकमा । फेरी खाजा खान होटल पस्यो डेढ दुई सय त सकिहाल्छ । हुन त पसलमा काम गर्नेको सजिलो छ । दिनभरी एकैठाउँ बस्ने त हो नि । त्यसो भएपछि भोक पनि नलाग्ने हो की ?
यो काम कति गाह्रो छ त दाजु ?
काम त सबै गाह्रै हुन्छ नि । यो पनि त्यस्तै हो ।
पहिला–पहिला तपाईँहरूलाई इन्द्रचोक भित्र रिक्सा लान दिइँदैनथ्यो होइन, वान वे भनेर ?
पहिला–पहिला त के–के हुन्थ्यो, हुन्थ्यो नि । हाम्रो संघ नहुन्जेल त ट्राफिकले टायरको भ्याल्टु निकालेर हावा फूस्काउने, नगर प्रहरी आएर रिक्सा लगेर थानामा हाल्ने , पाँच सय तिरेपछि बल्ल छोड्ने , यता जा यता नजा भनेर दुःख दिने के–के गर्थ्यो । तर अहिले त हामी कमजोर छैनौ भाइ । धेरैलाई तह लगाई सकेका छौँ । ठमेलतिरको मै हूँ भन्ने कति गुण्डालाई त संघमै लगेर धुलाई गरिसकेका छौँ । जनसेवा प्रहरीलाई त हामीले घेरी घेरी नै दोहोलो काढ्या छौँ । सोह्रखुट्टेमा नयाँ इन्सपेक्टर आएको छ । अलि निउँ खोज्ने गरेको छ रे कुन दिन त्यल्ले पनि भेट्छ ।
रिक्सा चालक संघमा सबै रिक्सा चलाउनेहरू छन् त ?
किन नहुनु ? हामी सबै छौँ । हामी दैनिक दश रुपैयाँ वा महिनामा एकै चोटि तिनसय रुपैयाँ दिने गरि लेवि तिरिरहेका हुन्छौँ । प्रत्येक हप्ता मिटिङ हुन्छ । नयाँ रिक्सा चलाउनेहरूलाई प्रत्येक शनिबार संघले प्रशिक्षण दिन्छ ।
किन लिइन्छ त्यो पैसा ?
संघको मान्छे दिनभरी हाम्रै निम्ति खट्छ । जहाँ जे आइपर्योा त्यहाँ उ आइपुगेकै हुन्छ । उनीहरूलाई पनि खानुपर्छ, लाउनुपर्छ नि । वास्तवमा पैसा भएन भने संघ पनि त चल्दैन ।
भनेपछि संघ चाहीँ दरिलै बनेको छ ?
हेर्नुस् भाई अहिले कुनै ठाउँमा रिक्सा चढ्ने मान्छे, बाटोमा चढ्ने मोटरसाइकल, ट्राफिकले नचाहिने कुरामा दुःख दिने भयो भने पुरै काठमाडौं ठप्प हुन्छ । हिजो हामी साहूलाई रिक्साको भाडा दैनिक सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य थियौँ । संघले आन्दोलन गरेर आज हामीले पैँसाठ्ठी रुपैयाँ मात्र दिए पुग्ने भएको छ । यस्तो महंगीमा संघले साथ नदिएको भए कसरी बाँच्ने ?
रिक्सा साहूको कुरा आइहाल्यो। एकजना साहूको कति वटा रिक्सा हुन्छ ?
दुइवटा हुने देखि २०/३० वटा सम्म हुने साहूहरू पनि छन् । दैनिक पैँसाठ्ठी रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अनि बिग्रेमा मर्मत खर्च पनि साहुले नै बेहोर्छ ।
काठमाडौँमा अहिले कति रिक्सा गुड्छन् ?
सामान मात्र बोक्ने खालको समेत गर्योम भने बाह्रसय जति होला । यहाँ लगानीका हिसाबले तिन खालका रिक्सा छन् । एउटा साहुले लगानी गरेको रिक्सा , दोस्रो आफ्नै लगानीमा किनेको अनि आफैँले चलाएको रिक्सा , अनि तस्रो चाहिँ संघको रिक्सा । संघको रिक्सा त हाम्रै भै हाल्यो ।
ए संघले पनि रिक्सामा लगानी गरेको छ ?
हो । हामीबाट उठाइएको पैसाबाटै ति किनिएका हुन् । कतिपय साथिहरू संघको सदस्य चाहिँ भएको तर साहूको रिक्सा चलाउन नपाएका छन् भने उनीहरू खाली बस्नुपर्दैन । कहिले घर जाने कहिले यहाँ काम गर्ने अस्थायी साथिहरू पनि खाली बस्नुपर्दैन । साठ्ठीहजारमा एउटा राम्रो कन्डिसनको रिक्सा आउँछ । त्यसैले केही साथिहरूले आफैले किनेर पनि चलाएका हुन् ।
रिक्सा चलाउनेहरू कति शिक्षित हुनुहुन्छ ?
हामीहरू प्रायः जसो साधारण लेखपढ जान्ने नै छौँ । कसैले ठग्न सक्दैन हामीलाई । कोही कोही चाहिँ दश पास गरेर पढिरहेका पनि छन् यो काममा ।
कस्तो व्यवहार गर्छन् त तपार्इँलाई मानिसहरू ?
धेरै जसो त राम्रै छन् । कोही कोही चाहिँ पैसाको मामिलामा साह्रै किचकिचे हुन्छन् । जति दिए पनि हुन्छ भन्ने सोच्छन् । मोटरसाइकल चलाउनेहरू भने अलि हेपेर चलाउँछन् हुलमूलमा ।
आज तपाईँसँग भेट गरी कुरा गर्न पाउँदा रमाइलो लाग्यो । म खासमा नेपालमा पढेका मान्छेहरूले काम नपाइरहेको बेला तपाइँहरूले गरिरहनुभएको कामको पनि सम्मान हुनुपर्छ भनेर नै तपाइँहरूसँग कुरा गर्न आएको हूँ ।
हेर्नुस भाई तपाई मनमा त्यस्तो नलिनुहोला तर मैले देखेको कुरा के हो भने पढेका मान्छे स्वार्थी हुन्छन् । बाटोमा हिँडिरहेका बुढा बुढी अशक्तहरू लड्यो भने बरु हेरेर बस्छन् तर उठाइदिन लाज मान्छन् । हामी भए देखि तुरुन्त उठाइदिन्थ्यौँ । अनि उनीहरूलाई मेचमा बसेर खुट्टा हल्लाएर खाने जागिर चाहिन्छ , त्यसमाथि पनि हप्तामा एक दिन अनिवार्य छुट्टि चाहिने । हेर्नुस भाई हात, पाखुरा बजारेर खाने भए जे काम पनि पाइन्छ । तर यस्तो सुविधाभोगि पाराले काम पाइँदैन ।
Posted by वसन्त बलामी at 9:15 AM 1 comment:
Labels: पेसागत कुनो
छुट्टिए युवराज घिमिरे नागरीकबाट
वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे अन्ततः रिपब्लिका पब्लिकेसनबाट अलग्गिएका छन्। कान्तिपूर दैनिकबाट विनोद ज्ञवाली समूह अलग भएपछि पत्रकारको तानातान र लगानीकर्ताहरू बीचका कहिले जोडिने कहिले फूट्ने क्रम जारी रहेकै अवस्थामा उनी छिट्टै प्रकाशन हुन लागेको नागरिक दैनिक बाट अलग भएका हुन्।
पत्रकार घिमिरे कान्तिपूर राष्ट्रिय दैनिकका पूर्व सम्पादक पनि हुन्। यस अघि समय साप्ताहिक का सम्पादक रहेका उनले आफ्नै लगानीमा newsfront साप्ताहिक पनि प्रकाशन गर्दै आएका थिए। कान्तिपूरका लगानीकर्ताहरू कैलाश सिरोहिया र विनोद ज्ञवालीहरू बीच मतभेद भएपछि ज्ञवाली समूह त्यसबाट अलग भए लगतै उनले अर्को राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका निकाल्ने घोषणा गरिसकेका थिए। विनोद ज्ञवाली सँगै कान्तिपुर बाट तत्कालिन सम्पादक नारायण वाग्ले पनि आएका थिए। तर पत्रकार नारायण वाग्ले र विनोद ज्ञवाली समूह बीच पनि प्रकाशनको सेयरमा कुरा नमिले पछि वाग्लेले हरि श्रेष्ठ सँग मिली धुम्बाराही प्रकाशन खोले, जसले नेपालीमा दैनिकी र अंग्रेजीमा republica निकाल्ने तयारी गरे। यता ज्ञवाली समूहले भने समय साप्ताहिकको पत्रकारको सम्पूर्ण समूहलाई लिइ नागरिक दैनिक र यसअघि नै प्रकाशन भैरहेको newsfront साप्ताहिकलाई अंग्रेजी दैनिक बनाइ निकाल्ने घोषणा गरे। यस पछि सुरु भयो पत्रकार तानातानको खेल। खास गरी दुवै प्रकाशनले आफ्नो पहिलो तारो बनाए कान्तिपुर दैनिकलाई। त्यहाँका पत्रकारलाई धेरै सूविधा देखाउँदै दुवै प्रकाशनले आफूतिर तान्न कोशिस गरे र दुवैमा नाम चलेका पत्रकारहरू बढ्न पुगे।
यसरी नेपाली पाठकले चारवटा नयाँ राष्ट्रिय दैनिक आउने हल्ला बजारमा पाइएको थियो तर नाटकीय रुपमा करिब दुई साता अगाडि यी दुवै प्रकाशनका लगानीकर्ताहरू बीच एकिकरण भयो। यो एकिकरणले गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग नै फैलियो। अहिले सम्मकै बलियो टिमको रुपमा देखियो यो प्रकाशन अर्थात् रिपब्लिक पब्लिकेसन। तर कुरा यतिमा सिमित भएन। पत्रकार युवराज घिमिरे पुनः छुट्टिए यो समूहबाट। आफूलाई कुनै जानकारी नदिई दुई प्रकाशन एक भएकोले तथा आफैले प्रकाशित गरिरहेको newsfront पत्रिका पनि त्यहाँबाट प्रकाशन नहुने भएपछि उनी त्यहाँ बाट अलग भएका हून। विश्वस्त श्रोतका अनुसार त्यहाँ भित्र पत्रकार नारायण वाग्ले र युवराज घिमिरे बीच वरिष्ठता र वरियता क्रममा विवाद भएकोले पनि उनी त्यसबाट अलग्गिएका हुन्। अब पत्रकार घिमिरे आफ्नो पत्रिका newsfront साप्ताहिक प्रकाशन गर्न नयाँ लगानीकर्ताको खोजीमा रहेको र छिट्टै नै त्यसलाई निरन्तरता दिने सोचमा रहेको बताइन्छ।
Posted by वसन्त बलामी at 8:04 PM 1 comment:
चुनाव स्थगित भएपछि ....
'ओहो ६ बजिसकेछ , आज त स्ववियू चूनाव । झन् पो ढिलो उठिएछ । तै पनि ठिकै छ सात बजे मात्र चुनाव सुरु हुने त हो नि । ' मनमा यस्तै हतारो लिएर क्याम्पसतिर हान्निएको थिएँ म । खसिबजार पुगेपछि एक जना परिचित दाईलाई भेटेँ । कहाँ जाँदैछौ भनेर सोध्नुभएपछि ' आज हाम्रो क्याम्पसमा त चुनाव छ नि स्ववियूको ! भोट खसाल्न हिँडेको हो म त ! ' भनिहालेँ । उहाँले “लौ तिम्लाई थाहा छैन चूनाव स्थगित भयो त तिम्रो क्याम्पसमा। सबै बन्द छ नगए हुन्छ त्यतातिर ” भन्नुभयो । त्यसपछि म त छक्क परेँ । किन स्थगित भयो त आर.आर.मा चूनाव ? ल क्याम्पसमा त हिजो विद्यार्थीहरूबीच झडप भएको थियो तर हाम्रोमा त त्यस्तो कुरा पनि त भएको थिएन । हिजो राति निर्वाचन कार्यालयमा आगलागि भए पनि “चुनावी कागजात सुरक्षित छ त्यसैले भोली चुनाव हुन्छ, भोली ढुक्कसँग भोट खसाल्न आउनुहोस ” भनेर त हाम्रै अगाडि क्याम्पस प्रमूखले भनेका थिए नि । तै पनि अचानक यो किन रोकियो ? मोडल अस्पताल अगाडि केही एमाले निकट अनेरास्ववियुका साथिहरू एकले अर्कोलाई सम्झाउँदै थिए –' त्यता (क्याम्पस तिर देखाउँदै) नजाउँ है साथि खतरा छ ।' हँ के को खतरा ? कस्तो खतरा ? मेरो मनमा भने प्रश्न उठ्यो। तर ती साथि त केही नसोधि फरक्कै फर्की पो हाले त ।
म भने मनमा अनेक प्रश्न खेलाउँदै क्याम्पस अगाडि पुगेँ । म भन्दा अघि नै थुप्रै साथिहरू आइरहेका थिए । अखिल क्रान्तिकारीका उमेद्वारहरू पनि उपस्थित थिए त्यहाँ । सबै भन्दा पहिले सूचना नै पढौँ न भनि यसो क्याम्पस गेटमा हेरेँ । क्याम्पस प्रमूख गोपालचन्द्र पोखरेलले शान्तिपूर्ण र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव सम्पन्न हुने स्थिति नदेखिएकोले पठनपाठन र चूनाव राम्रो वातावरण नबनेसम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेका रहेछन् । हिजो दिउँसोसम्म सामान्य नै थियो क्याम्पसको वातावरण तर राती क्याम्पस प्रमूखले एकतर्फी रुपमा यो सूचना जारी गरे । नजिकै ल क्याम्पसको पनि गेटमा सूचना पढियो । त्यहाँ निर्वाचन अधिकृत र क्याम्पस प्रमूखबीच भएको छलफल पछि चूनाव स्थगित गरीएको भनी दुवैको हस्ताक्षर सहित सूचना टाँसिएको थियो । त्यो क्याम्पसमा त स्थिति तनावपूर्ण नै थियो रे हिजो ।
यता अखिल क्रान्तिकारी निकट विद्यार्थीहरूले यो चुनाव भाँड्ने षडयन्त्र भएको छ भने । यो षडयन्त्रमा क्याम्पस प्रमूख आफैँ संलग्न भएको आरोप पनि लगाए उनिहरूले । उनीहरू भन्दै थिए “ अखिल क्रान्तिकारीले चुनाव जित्ने निश्चित भएपछि अघिल्लो रात १२ बजे क्याम्पसमा आगो लगाए । सो आगलागीका बाबजुद पनि चुनाव हुने भएपछि एमाले अखिल आत्तिए । अनि क्याम्पस प्रमुखलाई नै प्रयोग गरे उनीहरुले । यो क्याम्पस प्रमुख एमालेले नियुक्त गरेको मान्छे हो । यसले पनि हाम्रो विजय भएको देख्न चाहँदैन । त्यसैले विनाकारण आज चुनाव स्थगित गरेको हो । अघिल्लो रात नै पनि बाहिरबाट गेट बन्द हुन्छ तर रातको १२ बजे क्याम्पसको अन्य कोठामा होइन, निर्वाचन कार्यालयबाट आगो लाग्छ । यहाँ क्याम्पस प्रशासनकै मिलेमतो छ। ” भोट खसाल्न भनी आएका विद्यार्थीहरु एकाएक भएको चुनाव स्थगनपछि अखिल क्रान्तिकारीको कोणसभाका दर्शक बन्न पुगे । अनि त्यहाँबाट नारा गुन्जिन थाल्यो – ' नालायक क्याम्पस प्रमुख राजिनामा दे ।' अखिल क्रान्तिकारी आर.आर.का अध्यक्ष के.पि. खनालले सोही सभामा उम्मेद्वारी मनोनयन दर्तासँगै पुरानो स्ववियु खारेज भएकोले अब चुनाव स्थगित भएको बेलामा त्यसको नेतृत्व अखिल क्रान्तिकारीले गर्ने कुरा बताइरहेका थिए । उनी भन्दैथिए–“ अब हामी स्ववियु कब्जा गर्नेछौं । हामी कहिल्यै नहार्ने चुनावमा सामेल भएका छौं । हाम्रो विजय भएको छ । ” त्यसपछि आएका सबै विद्यार्थीहरु त्यही ' विजय ' जुलुसमा जान तम्तयार भए ।म भने वरिपरि हेर्दै थिएँ । त्यहाँ केही प्राध्यापकहरु पनि छेउमा उभिएर के भएको यो ? भन्दै चिन्तित र आश्चार्य मुद्रा बनाएर गफिरहेका थिए । त्यसपछि म जुलुससँगै राष्ट्रिय सभागृह अगाडी पुगेर केही तस्वीर लिएपछि क्याम्पसतिरै फर्कन लाग्दै थिएँ । प्रहरीले रोके, ' चुनाव नै स्थगित भैसक्यो, तपाईहरु किन फेरि आइराख्नु भएको छ , यार ? ' झिन्झ्याट लाग्दो भाषामा उनीहरुले क्याम्पस जान लागेका विद्यार्थीहरुलाई यसो भन्दै फर्काए । त्यसपछि आज भोट खसाल्ने उत्साहले बिहानैक्याम्पस आएको म, त्यसै फकिएँ । घर आउँदै गर्दा बाटैमा पर्छ विश्वविद्यालय क्याम्पस किर्तिपुर । आफ्नो क्याम्पसमा चुनाव देख्न नपाएपनि कस्तो रहेछ त यहाँको रौनक, मन हौसियो । त्यसपछि बिचबाटै चुनाव भएको ठाउँतिर दोरिएँ । त्यहाँ सोचे जस्तै रौनकता थियो, विद्यार्थीको लामो लाइन अनि आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न आतुर ती मनहरु, अघिल्तिर अन्तिम चुनाव प्रचार गर्ने प्रयासमा विद्यार्थी उम्मेदवारहरु, अनि सुरक्षा चेकजाँच गरिरेहका सुरक्षाकर्मीहरु ।
टि.यु.मा दुइवटा बुथमा दुई दुई लागेर उभीएका विद्यार्थीहरुलाई हेरें । दुवैतिर उत्तिकै लामो लाइन थियो । यो उत्साह र रमाइलो हेरेरै भएपनि आफुले भोट खसाल्ने तिर्सना मेटिरहेको थिएँ म ।
दिउँसो नयाँ नेपाल प्रेसमा आफ्ना साथीहरुलाई चुनावी अनुभव बताउँदै थिएँ । त्यही बेलामा भित्रबाटै अपरिचित स्वर सुनियो, 'के भन्दैछौ भाइ ? वरिपरि हेर्नु पर्दैन ? निर्वाचन अधिकृत त यहीँ छन् । तिमीले केही बताउनै पर्दैन । सब थाहा छ हामीलाई ।' उनको कुरा सुनेर यस्सो बाहिर हेरेँ । एक जना अधबैँसे उमेरका मानिस प्रेसबाट भर्खर छापिएको पत्रिका पढ्दै थिए । तैपनि मैले आफ्नो कुरा सुनाउन जारी राखेँ, “हेर्नूस्, ल क्याम्पसमा त भीडन्त भएकोले निर्वाचन अधिकृत र क्याम्पस प्रमुख दुवैको सल्लाह र सहमतिमा संयुक्त सूचना निकालेर चुनाव स्थगित गरे । तर हाम्रो क्याम्पसमा त क्याम्पस प्रमुखको एक्लो निर्णयले स्थगित भयो चुनाव । त्यो पनि मिति नै फागुन ५ लेखिएको छ, तर हिजो त चैत्र ५ पो हो ।” मेरो कुरा जारी रहँदा कतिखेर ती अधबैँसे व्यक्ति नजिक आइपुगेछन् पत्तै भएन । उनले ' तिमी आर आरको विद्यार्थी हौ ? ' भनी सोधे । ' हो, बि.ए. दोश्रो वर्षमा पढिरहेछु । ' उनले भने “ त्यहाँ त एमाले अखिलले हार्ला भनेर नै चुनाव स्थगित गरिएको हो । हिजो आगलागी भएको निहूँ बनाउन खोजेका थिए क्याम्पस प्रमुखले । तर क्याम्पस प्रमुखलाई नै थाहा रहेनछ कि दिउँसो उसको घर्रामा रहेका निर्वाचनका कागजातहरू राति अन्तै राखिँदा रहेछन् । त्यसैले दराजचाहिँ जल्यो तर सबै कागजात बचेछन् । अनि आज चुनावको निम्ति सबै तयारी सिद्धिसकेको थियो । तर हिजो बेलुका क्याम्पस प्रमुखले चुनाव नगर्ने नै रट लगाइरहे भन्या ।” यति सुनिसकेपछि ' तपाईँ आर आरमै कार्यरत हो सर ? ' मैले प्रश्न गरेँ । तर उनी त अक्मकाउन पो थाले । उनले हो पनि भनेनन्, होइन पनि भनेनन् । “अब चुनाव अनिश्चित हुने भयो आर आरमा” यसो भन्दै उनी अपरिचित दाजुसँग हिँडे प्रेसबाट । ला! मैले त्यसरी ठाडै प्रश्न गर्न नहुने पो थियो कि ? उनी त हिँडि पो हाले त । यदि साँच्चै निर्वाचनमा खटिएका थिए भने त उनलाई भित्री कुरा थाहा हुन्छ । आफूले सोधेको एउटै प्रश्नले थकथकी लागिरह्यो मलाई ।
Posted by वसन्त बलामी at 11:25 AM 1 comment:
पानी हो जिन्दगानी
किर्तिपुरको समलमा देखिएको पानीको अभाव (फोटो र भिडियोमा)
कहिले आउला मेरो पालो
पर्खाइमा वितिरहेका विहानहरू
Posted by वसन्त बलामी at 7:53 AM No comments:
आखिर के छ त्यो पर्खालभित्र ?
जे कुरा लुकाइन्छ, त्यो के हो ? सबैको चासो पनि बढ्छ। यो मानवीय स्वभाव नै हो। महाराजगंज चक्रपथ नजिक करिब एक वर्ष पहिलेदेखि एउटा पर्खाल लगाउने काम सुरु भयो। त्यहाँ भित्र के गरिँदै थियो ? कसैलाई थाहा थिएन तर महाराजगंज चक्रपथ वरिपरिको वस्तीलाइ नै थर्काउने गरी भव्य भवनको निर्माण गरिएको कुरा पछि थाहा भयो। यसरी पूरै जमिन थर्काउँदा सो क्षेत्रमा ध्वनी प्रदुषणको त कुरै छोडौं धेरैका घर नै चर्किनेसम्म भएको समाचार बाहिर आयो। त्यहाँका वासिन्दाका गुनासा कतिले सुने त्यो भने थाहा छैन। त्यो पर्खाल अगाडि कसैलाई उभिन दिइँदैन। गाडी रोकेर चढ्ने त झन् कुरै भएन। हजुर, तपाईले अनुमान लगाउनु भइसक्नुभो होला। त्यस पर्खालभित्र छ, विश्वकै सर्वशक्तिमान ह्वाइट हाउसको नेपालस्थित प्रतिनिधि घर अर्थात् अमेरिकी राजदूतावास। करिब दुई वर्षअगाडि फोहरा दरबारमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासको पर्खालको फोटो खिचेपछि एक जापानी पर्यटक पक्राउ परेका थिए। यहाँको पर्खालमा पनि त्यसैगरि फोटो खिच्न मनाही लेखिएको छ।
अमेरिका जान भिषा लगाउन जाने नेपालीहरू त्यस दूतावासभित्र जान त पाउँछन् तर अन्तर्वार्ता दिने ठाउँसम्म पुग्न तीन पटक कडा सुरक्षा जाँच दिनुपर्छ। त्यहाँ जाँदा पानीको बोतल लिएर जान पनि मनाही छ। अन्तर्वार्ता दिने कोठामा रेडियोको स्टुडियोमा जस्तो सिसाले बारिएको छ। अन्तर्वार्ता लिने मान्छे सिसा पारी र दिने मान्छे वारी हुन्छ। उनीहरुबीच माइक्रोफोन र स्पिकरको सहयोगले कुराकानी हुन्छ।
त्यस दूतावासको कर्मचारी छिर्ने ढोका भने अलग हुन्छ। त्यहाँ पस्न सबैभन्दा पहिले कर्मचारीले आफ्नो परिचय पत्र (Id card) मेसिनमा छिराउँछन्। त्यसपछि screen मा सो कर्मचारीको जन्ममिति देखि सबै विवरण देखिन्छ। अनि विभिन्न कोड नं. थिचेपछि मात्र ढोका खुल्दछ। यस्तो कुरा बाहिर देशमा मात्र छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ तर अमेरिकी राजदूतावासमै रहेछ।
अमेरिकी राजदूतावासमा करिब डेढ सय कर्मचारी त सुरक्षाकै निम्ति खटिएका हुन्छन्। अर्को कुरा बाहिर (मूल गेटमा) बसेका सुरक्षाकर्मीलाई त भित्रको संसार कस्तो हुन्छ, थाहै हुँदैन। तर भित्रबाट भने क्यामेराको मद्दतले झण्डै निर्मल निवाससम्मको दूरीको सबै गतिविधिको निरिक्षण र रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। एक पटक एक जना रातको समयमा खटिएका कर्मचारीले वाकीटकीमा तुरुन्तै जवाफ नफर्काएको निहूँमा जागिरबाटै हात धुनुपर्‍यो रे ड्यूटीको समयमा सुतेको भनेर। अमेरिकन राजदूतावासमा करारमा रहेका सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर स्थायी नियुक्ति पाएका प्रशासन प्रमुख, राजदूत लगायतका सबैले आफ्नो काममा साना वा ठूला गल्ती गरे भने तत्काल वर्खास्त हुन सक्ने प्रावधान छ। तर बढी जसो सुरक्षाको मामिलामा यस्तो हुने गर्छ।
अर्को रोचक कुरा त्यहाँभित्र बेला बेलामा अप्रत्याशित रुपमा एक प्रकारको साइरन बज्छ। यो बज्नासाथ सबै कर्मचारीहरु जो जुन ठाउँमा भए पनि एक भूइँमा घोप्टो पर्ने गर्छन्। यहाँसम्म कि चर्पीमा रहेकालाई समेत बाहिर निकाली घोप्टो पारेर सुत्न लगाइन्छ। सबैलाई बाह्य आक्रमणबाट सतर्क राख्न यो अभ्यास गरिन्छ। यो कुराले मलाई इतिहासका जंगबहादुरको याद दिलाउँछ, जो त्यसबेला नेपालका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति थिए, तर उनी सुत्ने बेला आफ्नो सिरानीमुनि तरवार राखेर सुत्ने गर्थे रे। किनकी बलियो भएकैले पनि उनका धेरै शत्रुहरू थिए रे।
शक्तिसँगै डर र सुरक्षा पनि गाँसिएर आउँछ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो।
Posted by वसन्त बलामी at 7:08 PM 1 comment:
देशबासीको नाममा सम्बोधन = .....सम्बोधन ?
माघ १२ गते प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड'ले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरे। सो सम्बोधन हुने खबर बिहानै थाहा पाएको थिएँ। त्यसैले दिनभरी जो जतिलाई भेटेँ सबैलाई 'आज बेलुका ७ बजे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दैछन् है नछुटाउनुहोला' भन्दै हिडेँ। तर धेरैले 'लोडसेडिङले गर्दा के सुनिन्छ र? के हेरिन्छ र? ' भन्ने जवाफ पाएँ र नतमस्तक हुन पुगेँ।
मनमा भने अनेक तर्कनाका छालहरू उठ्दै बस्दै उर्लिरहेका थिए। शहर बजारमा फरक–फरक मानिसका फरक–फरक अनुमानहरू अगाडि आइरहेका थिए। 'कतै असफल भएँ भन्दै सरकार छोडेको घोषणा पो गर्ने हुन् की?' 'कतै अधिनायकवाद लागु गर्ने गरी कडा घोषणा गर्ने पो हो की?' मेरो अनुमान भने विलकुल भिन्न थियो। केही समय अघि 'जनआस्था' मा पढेको थिएँ की नयाँ सरकारले उपल्धीमूलक काम गर्न नसक्नुका कारणहरू/अप्ठ्याराहरू, बाह्य वा देश भित्र पनि भएका विभिन्न दबाबहरू बारे स्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी यो सरकारले गर्दैछ भनेर। त्यसैले मैले त्यस्तै अपेक्षा पनि गरेको थिएँ। निकै व्यग्रताकासाथ बेलुकीको सात बजेलाई कुरेँ। सात बजेको रेडियो नेपालको समाचार पछि मात्र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुरु भयो ―“आदरणीय आमाबुबा, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरू......।”
सुरुवातमै उनले आफू 'नागरिकको हैसियतले पनि आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न गैरहेको छु' भनेपछि म एकछिन पुलकित पनि भएँ। उनले भने―“आज सरकार सञ्चालनको पाँच महिनाको अनुभवपछि मैले स्पष्टसँग भन्नुपर्दर्छ राज्यसत्ताको पूरानो स्वरुप, संस्कृति र शैलीका कारण नाटकीय सुधार सम्भव हुँदो रहेनछ।” उनले लोडसेडिङको समस्या, सामाजिक विभेद, बेरोजगारी समस्या सबैको कुरा उठाए। करिब पौने एक घण्टाको यो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झण्डै आधा समय त यस्तै अनुभवहरू सुनाए। यि सुनिरहँदा लाग्थ्यो 'ए यिनले त हाम्रा समस्या बुझेका रहेछन् नि गाँठे'।
सम्बोधनको बिचमा उनले नेपालमा एक हप्ताभित्र दाइजो प्रथा रोक्ने र छोरीलाई छोरा सरह अंश दिनुपर्ने घोषणा समेत गरे। दलित शहिद दिलबहादुर रम्तेलको नाममा छात्रवृत्ति स्थापना गर्ने भने। त्यसपछि उनले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन मौखिक झापड दिए। कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा टोकनप्रथा लागु गरि क्रमैसँग काम गरिदिनुपर्ने, एक दिनमा हुनुपर्ने कुनै काम किन सम्पन्न हुन सकेन भनि सम्बन्धित जनतालाई लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ भन्ने घोषणा गरे। यस अघि घुस लिने कर्मचारीलाई मात्र भ्रस्टाचारी भनिन्थ्यो भने अबबाट घुस दिएर काम गराउन खोज्ने व्यक्ति पनि भ्रस्टाचारी घोषित भई कारबाहीको भागिदार हुने भए। यसैगरि मन्त्रीहरूले कार्यक्रमतिर भाषण गर्न छाडेर दश बजेदेखि पाँच बजे सम्म कार्यालयमै रहनुपर्ने, बिहान वा बेलुकी अरु समयमा आउने मानिसहरूले चाकडी गर्ने, अनावश्यक समस्या बनाइदिने जस्ता कार्य गर्ने भएकोले भेट्न आउने मानिसहरूलाई सोहि समयमा मात्रै भेट्नुपर्ने घोषणा गरे।
सोहि सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले बन्द,हड्ताल जस्ता कुरामा सरकारले कडा निति लिने पनि घोषणा गरे भने यसरी समय बर्बाद गर्ने युवावर्ग अनि भट्टी पसलमा रक्सी खाँदै देश विकास नहुनुको दोष सरकारलाई दिइरहने मानिस प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे। अनि अचम्मको कुरा उद्योगि व्यापारी
समूदायलाई “अस्पताल,सडक, पुलनिर्माण जस्ता सेवाका काममा पनि तपाईंहरूको नाम आउने कहिले?” भन्ने भावुक कुरा पनि व्यक्त गरे (स्वयंकर घोषणा कार्यक्रमको त विरोध गर्ने नाफामूखि उद्योगि व्यापारीलाई सेवा र त्यागको कुरा?)। मिडियालाई सकारात्मक कुरामात्र लेखेर देश विकासमा योगदान दिन पनि अनुनय विनय गरे प्रधानमन्त्रीले। सम्बोधनको अन्त्य सम्म नै भावुक र यस्तै घोषणा गरीरहे उनले।
यो सम्बोधन भइरहँदा मेरो बुबाको पहिलो प्रतिक्रिया आयो–“ बोल्न चाहिँ कस्तो जानेका छन् त हे यिनले, काम चाहिँ केही गर्ने होइन ”। सम्बोधन सकिएपछि म पनि अलमलमा परेँ। मेरो अपेक्षा के थियो ? सम्बोधनमा के आयो ? यहाँ सम्मकी “हामी सँग सत्ता सञ्चालनको अनुभव पनि त थिएन ” सम्म भनियो। न त्यहाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका पछाडि भएका अदृश्य दबाबको कुरा गरियो न त सरकारको निति तथा कार्यक्रम लागु गर्न नसक्नुका कारण नै खोलियो। बरु फेरी एक पटक पुरानै निति तथा कार्यक्रमको पुनःप्रशारण जस्तो पो भइदियो नयाँ सम्बोधन।
नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ बाट सम्बोधनको नियमित श्रृङ्खला जस्तै चलाएका थिए। उनले नारायणहिटी छोड्ने बेलासम्म धेरै पटक देशबासीको नाममा सम्बोधन गरेका थिए। प्रत्येक पटक सम्बोधन हुने बेला के भन्न लागे त भनेर कान ठाडा हुन्थे , आँखा चनाखा हुन्थे हाम्रा तर सम्बोधन पछि ' फेरी उस्तै कुरा ' भन्दै आ–आफ्नो काममा जान्थ्यौँ। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको देशबासीको नाममा दोस्रो सम्बोधन आयो , झण्डै त्यस्तै प्रतिक्रिया आयो अधिकांश जनताहरूको। आखिर कति भिन्न छ त यी दुई सम्बोधनमा ? ज्ञानेन्द्रले सम्बोधन गर्दा लोडसेडिङ यति विध्न थिएन। मलाई लाग्छ त्यतिखेर अहिले भन्दा धेरैले प्रत्यक्ष सुनेका हेरेका थिए – देशबासीको नामको सम्बोधन। अहिले सात समूहमा बाँडीएको लोडसेडिङ क्षेत्र अनुसार केवल एउटा समूहले मात्र अर्थात् १/७ जनताले मात्र यो सम्बोधन सुने। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा ' लोडसेडिङको यो समस्या तत्काल हल गर्न सकिने कुरा होइन ' भनिरहँदा उनलाई मत दिएर त्यहाँ सम्म पुर्‍याउने मतदाताहरू लोडसेडिङको अँध्यारोमा कतै हराउँदै/विलाउँदै गएको जस्तो लाग्न थालेको छ।
यो सम्बोधन पछि ' फेरी आश्वासनको अर्को पोको आयो ' भन्ने कुराले मन नै गरुङ्गो हुन पुग्यो। राजतन्त्रात्मक नेपालको सबैभन्दा अलोकप्रिय राजा र गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रीलाई यसरी दाँज्नु सही या गलत के हो? थाहा छैन। नयाँ सरकारको क्रियाकलाप र देशको दुर्गतीले गर्दा यहि गर्न पुगेँ। अनि मलाई लाग्छ अबको छ महिना पछि फेरि यस्तै भावुक, मन छुने सरल भाषा लिएर प्रधानमन्त्री देशबासीको नाममा सम्बोधन भने गर्ने छन् ,उही आश्वासन र दोषारोपनको भारी विसाउन। मेरो चाहना छ अब अर्को सम्बोधन नआओस् , काम भएर जाओस्। हाम्रा समस्या समाधान हुँदै जाउन्। हाम्रो जीवन सरल बनेर जाओस्। यसो भए कति राम्रो हुन्थ्यो।
Posted by वसन्त बलामी at 7:31 PM No comments: